हुक्का : काठमाडौंका युवायुवतीको मिल्ने साथी, हुक्काको लत कसरी लाग्यो ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा हुक्काले ह्वात्तै क्रेज लिएको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा यसको माग बढ्दो छ । कलेज पढ्ने युवायुवतीमा हुक्काको मोह जाग्दै गएको पाइएको छ ।
पहिले माटोबाट बनाइएको सुन्दर भाँडामा हुक्का तान्ने प्रचलन थियो । पहिलेपहिले हुक्का तान्नेहरुलाई कतिपयले समाजमा अलिक हुनेखानेकोको दर्जामा समेत राख्थे । पुराना चल्तीका हुक्काको प्रयोग त के देख्न पनि हम्मेहम्मे छ अहिलेको पुस्तालाई ।
राजधानीका प्राय: रेष्टुरेन्टको मेनुको अन्त्यमा लेखिएको हुन्छ ‘हुक्का एभाइलेवल’ । र, युवायुवतीको ध्यान आँखा त्यहीँ पुग्छ । निकोटिन नहुने र स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने भन्दै युवायुवतीको सर्कल हुक्काको लतमा फसेका छन् ।
सामान्यतया: चुरोटको लत लागेमा छुटाउन गाह्रो हुने आममानिसको धारणा छ भने हुक्कालाई त्यसको विपरीत दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हुक्का विभिन्न फ्लेवर (स्वाद)मा पाइन्छ । उदाहरणका लागि डबल एप्पल, स्ट्रबेरी, बनाना, चकलेट तथा मिन्ट । हुक्का सेवनकर्ताले आफूलाई मनपर्ने स्वादमा त्यसको आनन्द लिन सक्छन् ।
हामीले आँखै अगाडी एउटा युवतीहरुको समूहले हुक्का तानिरहेको देख्यौं । उनीहरुले लामै छलफलपछि डबल एप्पल फ्लेवरको हुक्कामा सहमति गरे । ६ जनाको समूहमा आएका युवतीहरुले एक रेष्टुरेन्टमा हुक्काबाहेक अरु केही पनि मगाएनन् । उनीहरु हुक्कामा यसरी रमाएका थिए कि मानौं हुक्का उनीहरुको अति मिल्ने साथी हो ।
सेतो धुँवाको कुइरीमण्डल । केही खोकिरहेका । केही पालो तान्ने कुरिरहेका । एउटै हुक्काले कम्तीमा पाँच जनाले सन्तुष्टी लिन सक्छन् ।
कपालमा हल्का रातो पोतेकी । भद्दा ज्यान । स्मृति सुवेदी (नाम परिवर्तन) हुक्काको धुँवामा कला देखाउन माहिर छिन् । उनले नाक र मुखबाट विभिन्न आकारमा धुँवालाई बाहिर फाल्छिन् । उनको कला साथीहरु रमाइलो मानेर हेर्छन् । हावामा देखिएको हुक्काको धुँवा देख्दा लाग्छ- यो रेष्टुरेन्ट होइन, इट्टाभट्टा हो ।
हुक्काको लत कसरी लाग्यो ?
स्मृति भन्छिन्, ‘सानैदेखि होस्टेलमा बसियो । म होस्टेलमै हुर्केको हो । साथीहरुसँग चुरोट खान सिकियो । पछि ममीड्याडीले थाहा पाउनुभयो । चुरोटले निकै असर गर्दो रहेछ । यसको लत हटाउन हुक्काको सहारा लिएँ । अहिले हुक्काको लत लाग्यो ।’
स्मृतिसँगै आएकी अर्की युवतीको भने धारणा अर्कै छ । उनको बुझाइ आममानिसको जस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘आफूलाई मनपर्ने फ्लेवरमा हुक्काको मजा लिन पाइयो । यसमा निकोटिन पनि हुन्न । स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन ।’
हुक्कामा भुलेका स्मृति र उनको ग्रुप प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । शहरी क्षेत्रमा कलेज पढ्ने युवायुवतीहरु हुक्कासँग लुकामारी गर्न थालेका छन् । कलेज समय सकिएपछि उनीहरु सिधै कुनै रेष्टुरेन्टमा जान्छन् र तान्न सुरु गर्छन् ।
सामान्य ठाउँमा हुक्काको मूल्य २०० देखि ३०० सम्म पर्छ । सुरुमा हालिएको फ्लेवरको मात्राले अर्को एकपटक कोइला थप्दासम्म काम गर्छ । रेष्टुरेन्टले कोइलाको मूल्य कम्तीमा २० रुपैयाँ चार्ज लिन्छन् ।
उता रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरु भने हुक्काबाट राम्रो आम्दानी हुने बताउँछन् । ‘हुक्का सेवन गर्नेहरुले हल्ला चाहिँ बढी गर्छन् तर कमाई राम्रो हुन्छ, ‘ एक रेष्टुरेन्ट सञ्चालकले भने । उनका अनुसार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेको समयमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुन्छ ।
हुक्काले समान्यतया: असर गर्दैन भन्ने बुझाई गलत भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार युवापुस्तामा लोकप्रिय हुक्का पनि खतरनाक छ । हुक्का प्रयोग गर्ने र त्यसको धुँवा लिने मानिसहरुमा खतरनाक रसायन बेन्जिनको प्रभाव परेर रक्तक्यान्सर ल्यूकेनिया सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । बेन्जिनलाई क्यान्सरजन्य तत्व मानिन्छ ।
हुक्कामाथि अनुसन्धान गरेका एक अनुसन्धानकर्ता कासिमका अनुसार हुक्कामा सुर्तीलाई तातो बनाएर धुँवा उत्पन्न गर्न बलिरहेको कोइला प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक हुक्कामा अन्य विषाक्त तत्व पनि हुन्छन् । उनका अनुसार हुक्काबाट निस्कने धुँवाले मानवस्वास्थ्यलाई हानी गर्छ ।
तस्बिर : मालिंगो